#Cali Nuur Salaad oo dhibaato xoogan ka wado Xafiiska Ra'iisul Wasaare Khayre - Get Latest News From Horn of Africa
#Cali Nuur Salaad oo dhibaato xoogan ka wado Xafiiska Ra’iisul Wasaare Khayre
By On Feb 23, 2019 Last updated Mar 30, 2019
Caqabad wayn ayaa ka taagan Xafiiska Warfaafinta Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre, kadib markii uu xumaaday xiriirka kala dhaxeeyo Warbaahinta madaxa banaan, taasi oo ay sabab u yihiin shaqsiyaadka masuulka ka ah qaybta Warfaafinta Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Somaliya.
Caqabadan oo horay u taagnayd ayaa soo ifbaxday todobaadkii la soo dhaafay, kadib markii koox Suxufiyiin ah ay toos cabasho uga muujiyeen Xafiiska Warfaafinta Ra’iisul Wasaaraha Somaliya Xasan Cali Khayre, maadaama Suxufiyiinta ay u dulqaadan waayeen dhibaatooyinka joogtada ah ee shaqsiyaadka Warfaafinta Khayre masuulka ka ah ay ku kacaan.
Suxufiyiinta ayaa sheegaya dhibaatada ugu badan inay ka imaaneyso Cali Nuur Salaad oo ah Agaasimaha Warfaafinta Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Somaliya, kaasi oo u dhaqma hab u muuqda kali talisnimo ku aadan shaqada Xafiiska.
Cali Nuur Salaad oo tan iyo markii qaybta Warfaafinta Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Somaliya madaxda looga dhigay dhibaatooyin ku haayay shaqaalaha Waaxdaasi, ayaa dhibaatooyinkiisa sii kordhiyay, wuxuuna falal tacadi shaqo kula kacay Suxufiyiinta madaxa banaan ee Warbaahinta ka hawlgasha.
Qof ka mid ah Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Somaliya ayaa Saxaafada u sheegay in Shaqaalihii qaybta Warfaafinta ka shaqeynaayay intooda badan uu kala eryay Cali Nuur oo xittaa uu eryay shaqsiyaad sanado badan Ra’iisul Wasaarayaal kala duwan la soo shaqeeyay oo Warfaafinta kala shaqeynaayay.
Qaybta Warfaafinta Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Somaliya waxaa isugu soo haray kaliya, shaqsiyaad hab qabiil ku jooga shaqada & kuwa ku jooga rabitaanka Cali Nuur Salaad, taasi oo muujinaysa hanaanka shaqada Xafiiska qaybta Warfaafinta ay noqotay mid sidii la doono loo maamulo.
Ma jirto xogo & macluumaad laga helo Xafiiska Warfaafinta Ra’iisul Wasaare Khayre, sababo ku aadan in Cali Nuur Salaad & Kooxdiisa ay soo duubaan muuqaalo la soo faaf reebay oo lagu faafiyo Baraha Bulshada, taasi oo shacabka lagu qaldo, maadaama aanan loo soo tabin xaqiiqda dhabta ah, sidoo kalena Warbaahintii madaxa banaan ee Xaqiiqdaasi soo tabin laheyd xiriir xumo awgeed aysan u tagin Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha.
Cabashadii todobaadkii hore ee Bahda Saxaafadda ayaa waxaa si wayn uga carooday Madaxweynaha dalka & Ra’iisul Wasaaraha oo raali gelin deg deg ah ka bixiyay tacadiga qaybta Warfaafinta Xafiiska Khayre ay kula kaceen Wariyeyaasha.
Bahda Saxaafadda madaxa banaan ayaa go’aansaday haddii isbedel muuqda uusan ku imaan qaybta Warfaafinta Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Somaliya aysan la shaqeyn doonin Xafiiskaasi.